UPDATE: Al-Shabaab oo Qadar Wakiil Kaga ah Qaraxyadda Somaliya! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Al-Shabaab oo Qadar Wakiil Kaga ah Qaraxyadda Somaliya!
UPDATE: Al-Shabaab oo Qadar Wakiil Kaga ah Qaraxyadda Somaliya!
Muqdisho (Halqaran.com) – Labo sano ayaa kasoo wareegatay markii dowladda Qatar ay dowladaha khaliijka iyo qaar kamid ah dowladaha qaaradda Africa ay ku eedeeyeen inay taageero kooxaha argagixisada ayaa waxaa soo baxaya warbixin muujineysa in dowladda Qatar ay wax ka ogtahay weerarada ka dhaca Somalia.
Wargeyska New York Times ayaa sheegay inuu helay cod laga duubay iyagoo Telephone kuwada hadlayo safiirka Qatar ee Somalia iyo nin ganacsade ah oo aad ugu dhow Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kana hadlayo weerar ka dhacay gudaha dalka Somalia oo dhaca qaaradda Africa.
Ninkan ganacsadaha ah oo lagu magacaabo Khalifa Kayed al-Muhanadi ayaa u sheegay in mintidiintu ay weerar bambaano ay ku weerareen magaalada dekeda leh ee Boosaaso oo ku taallo waqooyiga Soomaaliya, si ay u hormariyaan danaha Qatar iyaga oo meesha ka saaraya danaha dalka uu loolanka kala dhaxeyso ee Imaaraadka Carabta uu ka leeyahay Somalia.
Bishii May ayaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu dhuftay dhismo dowlad goboleedka Puntland ay ku leedahay magalada Boosaaso oo ah xarunta ganacsiga Puntland.
“Qaraxyada iyo dilalka, waxaan ognahay cidda ka dambeysa,” al-Muhanadi ayaa sidaas yiri isagoo Telephone kula hadlay safiirka 18 May, xilligaas waxa ay aheed toddobaad kadib markii uu dhacay weerarkaas.
Rabshadaha ay kamid ka yihiin qaraxyad iyo dilalka ayaa sida uu sheegay ganacsadahan reer Qatar loogu talagalay in dadka reer Dubai ay isaga cararaan magalada Bosaso. Ganacsadahan ayaa sidoo kale intii uu Telephone ka kula hadlayey safiirka sheegay in dalka Imaaraadka Carabta ay kahor istaagayaan inay cusbooneysiinayaan qandaraasyada ay halkaas ku joogaan, waxa uuna intaas raaciyey in heshiiska qandaraaskaas ay u weecinayaan dalka Qatar.
“Saaxiibbadeen ayaa waxa ay ka dambeeyeen qaraxyadii ugu dambeeyay,” ayuu yiri ganacsadaha.
Weerarkan oo ay mas’uuliyaddiisa sheegatay kooxda ISIS ayaa waxaa ku dhaawacmay sideed qof.
Mar wax laga weydiiyay wada hadalka telephone ka, al-Muhanadi iyo dowladda Qatar midna ma dafirin kamana doodin xaqiiqada wadahadalka dhanka Telephone ka ah, balse dowladda Qatar waxa ay sheegtay in lala hadlay muwaadin shaqsi ah oo aan lala hadlin sarkaal ka tirsan dowladda Qatar.
Codka la helay waxa duubtay hay’ad sirdoon oo ajnabi ah kana soo horjeedda siyaasadaha arrimaha dibadda ee Qadar, safiirku ma uusan muujin wax kuleel iyo ka xumaasho ah oo ku aadan fikirka ah in dowladda Qatar ay door ku leedahay qaar kamid ah qaraxyada ka dhaca qeybo kamid ah dalka Somalia.
Al-Muhanadi ayaa ah ganacsade la ogsoon yahay inuu aad ugu dhawyahay Amiirka Qadar. Waxaana jira sawirro ay labadoodu isla wadaagaan, sida ay sheegayaan wararka iyo farriimaha qoraalka ah ee ay soo saareen hay’adda sirdoonka, al-Muhanadi ayaa had iyo goor la safra amiirka.
Waraysi gaaban oo khadka telephone ka ah oo uu siiyay wargeyska New York Times, ayuu safiirka ku beeniyey inuu aqoon u leeyahay ganacsade al-Muhanadi isla markaana si deg deg ah ayuu u jaray Telephone ka.
Wareysi gaar ah oo telephone ka lagu la yeeshay ayuu safiirku ku sheegay in al-Muhanadi kaliya saaxiibo, dhanka kale ganacsadaha lagu magacaabo ayaa yiri Waxaan ahay nin hawl gab ah oo ganacsade ah, Ma metelo dowlad ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Mar la weydiiyay sababta uu ugu sharraxay kuwii weerarka ku qaaday Boosaaso inay yihiin saaxiibadiis al-Muhanadi wuxuu yiri, “Soomaalida oo dhami waa saaxiibbaday.”
Haddii qaraxii Bosaso loogu talagay inuu ka eryo Imaaraadka Carabta, ma ahan weerarkii ugu horreeyay oo halkaas lagu qaado. Ayuu sidoo kale yiri ganacsadahan.
Bishii Febraayo ee sanadkaan ayaa magaalada Bosaso lagu toogtay maareeyihii shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka isutagga Imaaradka Carabta u qaabilsanaa dekadda magaalada Bosaso iyo isla weerarkaas waxaa lagu dhaawacay seddex qof oo kale oo kamid ahaa saqaalaha shirkaddaas.